C#.Net နှင့် နိုင်ငံခြားတွင် အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေလိုလဲသိချင်ပါတယ် - MYSTERY ZILLION
အခု လက်ရှိအလုပ်လုပ်နေပါတယ် Windows Form ပဲ ရေးနေတာပါ။ASP.NET က သိပ်မရေးဖြစ်ပါဘူး Coding ပိုင်းတော့ရပါတယ် Design ပိုင်းမရပါဘူးဗျ ။ နိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးလုပ်ဖို့အတွက် စာမေးပွဲတွေဖြေရပါမယ် ဘာစာမေးပွဲတွေဖြေသွားရမလဲ သိချင်ပါတယ်?။
စာမေးပွဲဆို ရင်လည်း နံပါတ်လေး တွေလည်းသိချင်ပါတယ် ။ ဘာတွေလေ့လာသွားဖို့လိုလဲသိချင်ပါတယ် ။ နိုင်ငံခြားမှာ က WIndows Form နဲ့ ASP ဘယ်ဟာ အလုပ်ခေါ်တာများလဲသိချင်ပါတယ် ။ အခု Windows Form တစ်ခုတည်း ပဲလုပ်နေလို့ နောက်ထပ် Windows Form နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေဆက်လေ့လာရမလဲသိချင်ပါသေးတယ်ဗျာ ။ နောက်ဆို Windows ကို ရှိချင်မှ ရှိတော့မှာဆိုတော့ Web နဲ့ ပတ်သက်ပြီးပဲလေ့လာရမလား?ဘာတွေဆက်လေ့လာရမလဲခင်ဗျာ?
လုပ်ငန်း နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခက်ခဲလေးများကိုလည်း အတွေ့အကြံ ရှိတဲ့အစ်ကိုများ ပြောပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။
WinForm ကသိပ်အလုပ်မဖြစ်တော့ဘူး လို့ထင်တယ်ဗျာ။
အဲဒါဆို ကျွန်တော်ဘာပြန်လေ့လာရမလဲဗျ ဘာဆက်လေ့လာသင့်လဲဗျ ပြောပေးကျပါအုန်းခင်ဗျာ
Build your confidence, that's the most important skill.
July 2015 edited July 2015 Registered Users
If you have time, also try to learn and practise, PHP and MySQL.
If you want to get Microsoft Certificates, takealook at Exam Collection and pick exams that will suit you. E.g. 70-513 - TS: Windows Communication Foundation Development with Microsoft .NET Framework 4
The more you know (professionally), the better you will be :P
ဟုတ်ကဲ့ပါအစ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် >-